१ थाल भातको मूल्य १२ हजार रुपैयाँ, पानीको बोतलको ५ हजार ! – Nepal Online Khabar
१ थाल भातको मूल्य १२ हजार रुपैयाँ, पानीको बोतलको ५ हजार !
भाद्र १०, २०७८ बिहिबार 445
काठमाडौं : अफगानिस्तानमा ता’लिबानको नियन्त्रण भएसँगै देश छा’डेर बा’हिरिन चाहनेहरुको भि’ड का’बुल विमानस्थलमा भरिएको छ । काबुल विमानस्थलमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकहरुसँगै अ’फगानीहरु पनि भरिएका छन् ।
यी सबै का’बुलबाट बा’हिरिन आफ्नो पालो आउने प्रतिक्षामा छन् । यसरी प्रतिक्षामा बसेकाहरु भो’क र प्यासले म’र्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।का’बुलमा यो अ’स्तव्य’स्तताका कारण २० जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । मानिसहरु खाना र पानीसमेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विमानस्थल बाहिर एक थाल भातको मूल्य १०० डलर अर्थात झण्डै १४ हजार रुपैयाँ पर्न थालेको छ । यस्तै १ बोतल पानीको मूल्य ४० डलर अर्थात ५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यहाँ अफगानिस्तानको मुद्रा समेत लिइँदैन । पानी र खानाको लागि अमेरिकी डलरमा मात्र कारोबार भइरहेको बेलायती मिडिया इ’न्डिपेन्डेन्टले जनाएको छ ।
अफगानिस्तानमा ता’लिबानको नियन्त्रण हुन सक्ने आशंकामा विगत केही महिनायता अमेरिकासहितका अन्य देशहरुले डलर पठाउन बन्द गरेका थिए । यसकारण अफगानिस्तानमा अहिले डलरको अत्यन्तै अभाव छ । तर, विमानस्थलबाहिर खाना र पानी किन्नको लागि अनिवार्य डलर नै ति’र्नुपर्ने अवस्था छ । अ’फगानी मुद्रा चल्न छाडेपछि यहाँ मानिसहरु डलरको अ’भावमा खाना र पानीबिना त’ड्पिनुपरेको छ ।
Prevराजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खा’रेज गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको आग्रह !
Nextकालसर्प योगको अ’निष्टबाट कसरि जोगीने ?
बिजुली गाडी चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक सामग्रीको डिजाइन हुँदै
दुर्गा प्रसाईको आरोप- चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घुस मागे